Sirna filannoo walmakaa hojiirra oolchuuf waliigalamuun ibsame
Sirna filannoo walmakaa hojiirra oolchuuf waliigalamuun ibsame Featured
Obbo Shifarraa Shigguxee
Filannoodhaan sagalee kenname kamiyyuu teessumaatti jijjiiruun dorgomtoonni kadhimummaa dachaa akka argataniif, sirni filannoo walmakaa akka hojiirra oolu waliigalteerra ga'amuu Addi Warraaqsa Dimokiraatawaa Ummatoota Itoophiyaa (ADWUI) ibse.
Dura Taa'aan Wajjiira Mana Maree ADWUI Obbo Shifarraa Shigguxee, adeemsa marii paartilee siyaasaafi waliigaltee irra ga'ame ilaalchisee ibsa gaazexeesitootaaf Roobii galma waajjirichaatti kennaniin, yeroo ammaa paartilee siyaasaa 16 waliin ajandaalee marii 12rratti mari'achaa akka jiraniifi ajandaalee lamarrattis mariin xumuramuu himaniiru. Ajandaalee jiran keessaa seera filannoo fooyya'erratti marii gaggeeffameenis sirni filannoo walmakaa akka hojiirra oolu waliigalameera jedhan.
Akkasaan jedhanitti, sirni sagalee caalmaa akkuma jirutti ta'ee, sagaleen ummataa kamiyyuu gara teessumaatti akka jijjiramuuf sagalee caalmaan wayita mul'atuttis ta'e hinmul'annettis sirna bakka bu'iinsa madalawaa hojiirra oolchuun akka danda'amuuf yaadamee akka ta'es himaniiru.
Sirni kun dorgomaan kallattiin sagalee ummataa yoo argate yookaan argachuu baate, sadarkaa naannootti qooda sagalee paartiif kennamuun teessuma paarlaama yookaan kan mana maree naannolee carraa argachuu akka qabaatu ibsaniiru. Akkasumas dorgomaan tokko carraa kaadhimummaa dachaa akka argatu kan taasisuudha jedhaniiru. Seerri filannoo wayita fooyya'uttis teessuma paarlaamaa 660tti akka fooyya'uuf yaadamee mariin kun geggeeffamaa akka jiru Obbo Shifarraan eeraniru.
Labsii galmeessa paartilee siyaasaarrattis marii geggeeffameen paartii biyyaalessaa hundeessuuf miseensa kumaafi 500 kan barbaachisu ta'us, yeroo ammaa paartii tokko hundeessuuf miseensota kuma sadii qabaachuu akka qabu waliigalteerra ga'amuu himaniiru. Akkasumas biyyattiitti naannolee afuriifi bulchiinsa magaalotaa lamaanitti paartileen waajjira akka qabaataniifi guddataa akka adeeman gochuufis sirna deeggarsaa faayinaansii akka argatan waliigalteerra ga'ameera jedhaniiru.
Torban kana/This_Week 43228
Guyyaa mara/All_Days 1468008